မုန်တိုင်း: 1743.. ၂၀၁၁ နိုဘဲလ် ( ငြိမ်းချမ်းရေး ) ဆု ရသူများ
၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ လိုက်ဘေးရီးယားသမ္မတ Ellen Johnson-Sirleaf (၀ဲ)၊ လိုက်ဘေးရီးယား ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားသူ Leymah Gbowee (လယ်) နဲ့ ယီမင် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ Tawakkol Karman (ယာ)။ (ဒီဇင်ဘာလ ၁၀၊ ၂၀၁၁)
မတရားမှုတွေ၊ ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ အတွက် ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ကြတဲ့ ယီမင်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံက အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘဲလ်ဆု ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ ဆုချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနားကို မနေ့က နော်ဝေနိုင်ငံ မြို့တော် အော်စလိုမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
လိုက်ဘေးရီးယားသမ္မတ အီလင်း ဂျွန်ဆင် ဆာလိဖ်၊ လိုက်ဘေးရီးယား ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားသူ လီမက်ခ်ျ ဂဘိုးဝီ နဲ့ ယီမင်အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ တ၀ါကူးလ် ကာမန် တို့ကို အော်စလိုမြို့တော်ခန်းမမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘဲလ်ဆုတွေ ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ အထွေထွေ လူ့အခွင့်အရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးတွေ အတွက် အခုဆုရခဲ့ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက သက်သေထူနေပါတယ်လို့ နော်ဝေ နိုဘဲလ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌက ပြောပါတယ်။
မစ္စစ်ဆာလိဖ်ဟာ အာဖရိကတိုက်မှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တုန်းက ပထမဆုံး ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးသမ္မတ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘ၀လုံခြုံပြီး မြင့်မားလာစေရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက် သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက် အများက ချီးကျူးတာကို ခံခဲ့ရတာပါ။
လီမက်ခ်ျ ဂဘိုးဝီ ကတော့ ၁၄ နှစ်ကြာ လိုက်ဘေးရီးယား ပြည်တွင်းစစ်အဆုံးသတ်ရေး အကြမ်းမဖက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဆန္ဒပြဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
တ၀ါကူးလ် ကာမန် ကတော့ ယီမင်နိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူလည်း ဖြစ်ပြီး သတင်းသမား တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အသက် ၃၂ နှစ်ပဲ ရှိသေးတာမို့
နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်တွေထဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သလို ပထမဆုံး အာရပ်အမျိုးသမီး နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယီမင်နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့
အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ သူက ခေါင်းဆောင်တဲ့ နေရာတွေက ပါဝင်ခဲ့တာပါ။
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁.၅ သန်းလောက် တန်တဲ့ ဆုချီးမြှင့်ငွေကို ဆုရရှိကြတဲ့ အမျိုးသမီးသုံးဦး ခွဲဝေယူကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref:::: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-16124697 Nobel Peace Prize awarded in Oslo
The 2011 Nobel Peace Prize has been presented to three women ataceremony in the Norwegian capital, Oslo.
This year's award was won jointly by Ellen Johnson Sirleaf, the president of Liberia, Leymah Gbowee, the Liberian peace activist, and Yemeni pro-democracy campaigner Tawakkol Karman.
They were recognised for their "non-violent struggle" for women's safety and for women's rights to participate in peace-building work.
Chinese lawyer Liu Xiaobo won in 2010.
Each of this year's winners was presented withagold medal andadiploma.
The prize money of $1.5 million (£958,000) will be shared between them.
Mrs Sirleaf, 72, is Africa's first elected female head of state and is credited with helping to end Liberia's 14 year civil war. The announcement of her award came days before the country's presidential election.
She went on to winarun-off poll last month but her rival boycotted the vote alleging the first round was rigged.
The Liberian president told delegates that she was honoured to be following in the footsteps of the Africans who had won the prize before her, including South Africa's Archbishop Desmond Tutu and Kofi Annan, the Ghana-born former UN secretary-general.
Mrs Sirleaf also expressed her "deepest sympathy" for the people of Norway in the wake of the twin attacks carried out by Anders Behring Breivik on 22 July that led to the
deaths of 77 people.
"On behalf of all the women of Liberia, the women of Africa, and women everywhere in the world who have struggled for peace, justice and equality, I accept with humility the 2011 Nobel Prize for Peace," she said.
Ms Gbowee, 39, ledapeaceful campaign to end Liberia's civil war and oust its ex-President Charles Taylor.
She said: "I am humbled and honoured to have been selected and I receive the prize in the name of women who continue to work for peace, equality and justice across the world."
"I believe that the prize this year not only recognises our struggle in Liberia and Yemen. "It is in recognition and honour of the struggles of grass roots women in Egypt, the Democratic Republic of Congo, Cote d'Ivoire [Ivory Coast], Tunisia, in Palestine and Israel, and in every troubled corner of the world."
Ms Karman,a32-year-old mother of three, founded the organisation Women Journalists Without Chains in 2005 and becomes the first Arab woman to win the prize.
Addressing the audience in Arabic, she said: "Thank you for the award, which I consider as an honour to me personally, to my country
Yemen, to Arab women, to all women of the world, and to all people aspiring to freedom and dignity. Continue reading the main story Recent Nobel Peace Prize winners
"I accept the award on my behalf and on behalf of the Yemeni and Arab revolutionary youth, who are leading today's peaceful struggle against tyranny and corruption with moral courage and political wisdom."
Speaking before the presentation at Oslo's City Hall, Thorbjorn Jagland, the chairman of the Norwegian Nobel Committee, said: "We congratulate this year's winners of the Nobel Peace Prize. "You represent one of the most important motive forces for change in today's world, the struggle for human rights in general and the struggle of women for equality and peace in particular."
The Nobel committee receivedarecord 241 nominations for the 2011 prize.
The first Nobel peace prize was awarded in 1901 and the award takes its name from the Swedish scientist Alfred Nobel.
Labels: First histories-IV
0 - ဦး မှတ်ချက်ပေးထားပါသည်
1734.. PASSWARE Password Recovery Kit Professiona...
1733.. သမ္မတအိုဘားမားပေးလိုက်သည့် ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည်...
1731.. အိပ်ယာ နိုးတိုင်း ခါးနာ နေလား